China Evaporation and crystallization teknolojia mpanamboatra sy mpamatsy |JINTA
Molasses toaka fako ranon-javatra dimy vokany evaporation fitaovana
Loharano, toetra ary fahasimban'ny rano maloto amin'ny molasses
Ny rano fako alkaola molasses dia rano fako organika be loko sy avo lenta avoakan'ny atrikasa misy alikaola ao amin'ny orinasa siramamy mba hamokarana alikaola aorian'ny fangorahana ny molazy.Manankarena proteinina sy zavatra organika hafa izy io, ary misy sira tsy ara-organika kokoa toy ny Ca sy Mg ary avo lenta kokoa.SO2 sy ny sisa.Amin'ny ankapobeny, ny pH ny rano fako alkaola dia 4.0-4.8, COD dia 100.000-130.000 mg/1, BOD dia 57-67.000 mgSs, 10.8-82.4 mg/1.Ankoatr'izay, ny ankamaroan'ny karazana rano maloto dia asidra, ary ny loko dia avo be, volontsôkôlà-mainty, indrindra indrindra ny loko caramel, loko phenolic, loko Maillard sy ny sisa.Koa satria misy solida 10% eo ho eo ny fako dia ambany ny fifantohana ary tsy azo ampiasaina.Raha ariana mivantana any amin'ny renirano sy ny tany fambolena tsy misy fitsaboana izany, dia handoto mafy ny kalitaon'ny rano sy ny tontolo iainana, na hahatonga ny asidra amin'ny tany sy ny fampihenana ny tany, ary ny fitomboan'ny aretin'ny voly.Olana lehibe amin'ny tontolo iainana atrehin'ny indostrian'ny siramamy ny fomba fiatrehana sy fampiasana ny ranom-pako misy alikaola.
Ny fitaovana dia mampiasa rafitra fanerena midina an-terisetra dimy, miaraka amin'ny etona tototry ny loharano hafanana, fanafanana iray ary asa dimy misy vokany.Ny ranom-boankazo misy alikaola miaraka amin'ny fifantohana 5 ka hatramin'ny 6% dia mivondrona sy etona, ary ny slurry mivondrona manana fifantohana ≥ 60% dia alefa any amin'ny boiler ho an'ny fandoroana, ary ny hafanana vokarina dia mahafa-po ny etona ho an'ny fitaovana.Atsofohy any amin'ny fizarana teo aloha ny rano voapoizina mba hahazoana rano manalefaka.
Faharoa, ny tabilao fikorianan'ny dingana
Fahatelo, ny toetra mampiavaka ny dingana
1. Apetraho ny evaporator mitsitsy mba hanadio ny fitaovana, izay afaka mahatsapa ny fanadiovana tsy miato ary miantoka ny famokarana mitohy.
2. Ny fitaovana dia mampiasa fanaraha-maso programa mandeha ho azy mba hamonjena ny vidin'ny asa.
3. Ny fahombiazan'ny fanodinana avo lenta sy ny fiasana maharitra.
4. Amin'ny fampiasana slurry matevina hiverina amin'ny boiler, ny molasses dia afaka mamokatra alikaola tsy misy solika.
5. Ny evaporator mitsitsy dia napetraka ho an'ny vokatry ny fivoahana, izay afaka mahatsapa ny fanadiovana tsy an-kiato ary miantoka ny famokarana mitohy.
6. Ny toaka dia azo amboarina avy amin'ny laisoa nefa tsy ampiana solika amin'ny alàlan'ny slurry matevina mankany amin'ny boiler mba hampiasaina indray sy molasses.
teo aloha: Fomba famokarana ethanol
Manaraka: Aginomoto fizotry ny crystallization mitohy
Ny fampidirana threonine L-threonine dia asidra amine tena ilaina, ary ny threonine dia ampiasaina indrindra amin'ny fitsaboana, ny reagents simika, ny fanamafisana ny sakafo, ny sakafo fanampiny, sns. Indrindra indrindra, mitombo haingana ny habetsaky ny sakafo fanampiny.Matetika izy io no ampidirina amin'ny sakafon'ny zana-kisoa sy akoho amam-borona.Io no asidra amino voafetra faharoa amin'ny sakafon'ny kisoa ary ny asidra amino famerana fahatelo amin'ny sakafom-borona.Manampy L-th...